တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကျောက်ကျိယန် လ ျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကျောက်ကျိယန် လ ျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း
တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကျောက်ကျိယန် လ ျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Dec 19, 2017 in Best Web Awards, History |2comments
တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲဟောင်းမှ ၁၉၈၉ ခုနှစ် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲအား ရှုံ့ချပြီး အနောက်တိုင်းပုံစံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ချီးမွှမ်းလိုက်ခြင်း …… ။။။။။။။
၁၉၈၉ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် ဆန ်ဒပြပွဲ၌ ကျောင်းသားများဖက်မှ စာနာရပ်တည်ခဲ့ရွေ့ ဖြုတ်ထုတ်သတ် အလုပ်ခံရသော တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီခေါင်ဆောင်၏ လ ျှှို့ဝှက်အသံသွင်း ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၎င်းကွယ်လွန်ပြီး ၄နှစ်အကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၁၆နှစ်ကြာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခံရသော တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲဟောင်း ကျောက်ကျိယန်၏ လ ျှို့ဝှက်အသံသွင်း ရစ်ကော်ဒါတိပ်တွင် အစိုးရဆန်ကျင်ဆန ်ဒပြသမားများအား သတ်ဖြတ်မှုကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်ဆိုးဟု ပြောဆို ရှုံ့ချပြီး ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ် ပါတီ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆန့်ကျင်ရန်လိုမှုများအား စိမ်ခေါ်မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။ အသံသွင်းတိပ်ခွေအား တရုတ်ပြည်မှ ခိုးထုတ်လာပြီး ယခုလတွင် အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ် နှစ်ဘာသာဖြင့် နိုင်ငံတော်အကျဉ်းသား – ကျောက်ကျိယန်၏ လ ျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း အမည်တပ် ၂ဝနှစ်မြောက် တိန်အင်န်မင် လူသတ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် မတိုင်မှီ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်သည်။ (ဆောင်းပါး ရေးသားချိန် ၂၀၀၉ခုနှစ် မေလ ၁၄) ။။ ။။။ ။။။ ။။
စာအုပ်ထဲတွင် အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီအား ချီးမွှမ်းထားပြီး ဆန ်ပြသူတို့မှာ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ဦးဆောင်မှုကို ဖြုတ်ချရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဟု အခိုင်အမာ ဆိုကြောင်း စာအုပ်ကောက်နှုတ်ချက် ရရှိထားသော ရိုက်တာသတင်းဌာနအရ သိရသည်။ “၁၉၈၉ ဇွန် ၃ရက် ညဖက် မိသားစုနှင့်အတူ နောက်ဖေးပန်းခြံထဲ ထိုင်တုံး ပြင်းထန်များပြားတဲ့ သေနတ်သံများ ကြားရတယ် လို ကျောက် ရေးထားသည်။ ကဗာကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေမည့် ဖြစ်ရပ်ဆိုး ရှောင်လွှဲမရနိုင်တော့ပြီ။ ” သူက ဆက်ရွေ့…. လူအများစုက ကျုပ်တို့ကို အားနည်းချက် အနာအဆာတွေ ပြင်ဖို့သာ တောင်းဆိုတာ၊ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အစားထိုး လဲလှယ်ဖို့ ကြိုးစားခြင်း မဟုတ်လို့ အဲဒီအချိန်က ကျုပ်တင်ပြခဲ့သည်။ ။။။။ ။။။
စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း သဘောထား တင်းမာသူ နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုသူများအကြား အာဏာလွန်ဆွဲပွဲ အရှိန်တိုးမြှင့်လာသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် လူထုဆန ်ဒပြပွဲများက မသေချာ မရေရာမှုများ မြင့်တက်လာစေပြီး အငြင်းပွားမှုကို အမြင့်ဆုံးသို့ တွန်းပို့လိုက်သည်။ သဘောထား တင်းမာသူများကို ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်မှ အာဏာချုပ်ကိုင်ထားသူ တိန်ရှောက်ပိန် ထောက်ခံလိုက်ချိန်ဝယ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ထုတ်ပြန်ရန် သဘောတူကြပြီး ကျောက်ကျိယန် တဦးသာ ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သည်။ ။။ ။။။
ကျောင်းသားတွေကို ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းဖို့ စစ်တပ်ကို ဆင့်ခေါ်တဲ့ ကူမြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးအဖြစ် သမိုင်းတွင်ရစ် မခံဘူးလို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကိုယ်ငါ ဆုံးဖြတ်ထားကြာင်း မှတ်တမ်းတွင် ဖေါ်ပြသည်။ အနာဂါတ်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရာ၌ အနောက်တိုင်း ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီအား ချီးမွှမ်းထားပြီး ကျုပ်တို့ အဲဒီ ပန်းတိုင်သို့ မချီတက်လျင် တရုတ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အတွင်း ဖြစ်နေတဲ့ မူမမှန်တဲ့ ပုံပျက်ပန်းပျက် အခြေအနေကို ဖြေရှင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ။။။။။။။
******** ******(ပီကင်းမြို့ဗဟိုရပ်ကွက် နေအိမ်ပန်းခြံတွင် အကျယ်ချုပ်ဘဝ သတင်းစာဖတ်နေသော ကျောက်ကျိယန် (၁၉၉၅) ………)
တင်းကြပ်တဲ့ စောင့်ကြည့်မှုးများအောက် နေရပြီး တွေ့သမျလူအားလုံးကို ပို်က်စိပ်တိုက် ရှာဖွေစစေ်ဆး နောက်ယောင်ခှုံမှုကြောင့် လ ျှို့ဝှက်စွာ အသံသွင်းတဲ့ သူ့မှတ်တမ်းအကြောင်း မိသားစုဝင်များပင် သတိမပြုမိခဲ့ကြပေ။ ပီကင်းအော်ပရာ နှင့် ခလေးသီချင်း တိပ်ခွေများတွင် နာရီ၃ဝကြာ သွင်းထားတဲ့ တိပ်ခွေများအား ၂၀၀ဝ ခုနှစ်တဝိုက် အသံသွင်းယူသည်။ ထိုတိပ်ခွေ ၃ဝကို ထိပ်တန်းအရာရှိခေါင်းဆောင်ဟောင်း ၃ဦးက တရုတ်ပြည်မှ နောက်ပိုင်းတွင် ခိုးထုတ်လာခဲ့ကြသည်။ ။။။ ။။။။
ကျောက် ရိုက်ချိုးခံရလို့ နာကြည်းမုန်းတီးနေမည်၊ အနည်းဆုံးတော့ များပြားပြင်းထန်လှတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး စနစ်အောက် တိန်အင်န်မင် အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးစကား တခွန်းတလေတောင် သူ မထုတ်ပြန်နိုင်တော့ဘူး လူတွေ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်.. ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ကြ လို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အယ်ဒီတာ Adi Ignatius မှ ဂါးဒီယန်း သတင်းစာသို့ မှတ်ချက်ပြုသည်။ တိန်အင်န်မင် ဖြစ်ရပ်ဟာ အဲသလို အဆုံးသတ်ဖို့ မဟုတ်ကြောင်း၊ ထိပ်ပိုင်းအဆင့် အာဏာလွန်ဆွဲပွဲတခု ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရ ဝါဒဖြန့်ချက် လှိုင်းကြလေထထန် သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် အကြမ်းဖက် သူပုန်ထမှုနဲ့ လားလားမျှမဆိုင်ကြောင်း လူတွေကို အမှတ်ရစေလိမ့်မည်။ ။။။။။။
စာအုပ်သတင်း အချိန်မတိုင်ခင် ပေါက်ကြားမည် အလွန်စိုးရရွေ့ ထုတ်ဝေသူ Simon နှင့် Schuster တို့မှ ကက်တလော့တွင် စာအုပ်အမည် – မပေးရသေး၊ စာရေးသူ – အမည်မသိဟု ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရ သိသွားခဲ့လျင် စာအုပ်မထွက်ဖို့ ဘယ်နည်းကိုမဆိုသုံး တားဆီးမှာမို့ လုံခြုံရေးအတွက် တကယ့်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ရတယ်။ စီးပွားရေးအရတင် မကဘူး လို့ Ignatius မှ ဆက်ပြောသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးထဲ ပိတ်ထားမှ သေချာပေမဲ့ အချက်အလက်များဟာ အင်တာနက် နဲ့ ဘလော့ဂ် ရေးသားမှုများက တဆင့် ပျံ့နှံရောက်ရှိသွားမည်လို့ Ignatius ယုံကြည်နေသည်။ ။။ ။။။။
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် စာအုပ်ကို တရုတ်ဘာသာ ထုတ်ဝေသူ နှင့် ကျောက်၏ ထိပ်တန်း လက်ထောက်ဟောင်း ဘောင်ပုက မှာကြားချက်ရယ်လို့တော့ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အချက်အလက်များ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ညွှန်ပြနေတာ ကျောက်က သူ့ပြောချင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်များ လူကြားထဲရောက်စေချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ စာအုပ်ပါ အချက်အလက်များ သိပ်ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ရှိလွန်းတာမို့ သူ အသံသွင်းမှု မစခင် စာရွက်ပေါ် ရေးချထားတဲ့ မူကြမ်းနဲ့ ၁၉၉၃ခုနှစ်လောက်ထဲက ပြင်ဆင်ခဲ့ပုံရတယ်။။။။။။
သူက ဆက်လို့ ဒီစာအုပ်က တရုတ်နိုင်ငံရေးအပေါ် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိမယ်ထင်တယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖတ်ပြီးရင် သူတို့အတွေးအမြင်မှာ ရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ် အုံကြွမှုအပြီး ထောင်အချခံရတဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး အစိုးရအရာရှိဖြစ်သူ ဘောင်ရဲ့အဖေ ဘောင်တောင် ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောရာ၌ စာအုပ်ဟာ ပါတီဝင်များအပေါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဝါရင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ပိုဖတ်ဖွယ်ရှိတယ်။ သူတို့ စဉ်းစားဖို့ အချက်အလက် များစွာ ပေးမှာဖြစ်ပြီး ပါတီရဲ့ အခြေခံ ရပ်တည်မှုကို သုံးသပ်ခွင့် ရစေပါလိမ့်မည်။ ။။။။။။
ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ ၎င်းကို နားကြပ်ဖုန်းပေးရွေ့ နောက်ယောက်ခံလိုက် စောင်ကြည့်ထားသော ပီကင်းဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်တခုတွင် ပြုလုပ်သည့် အင်တာဗျူး ကောက်နှုတ်ချက်ကို နားထောင်ခိုင်းခဲ့ရာ တိပေ်ခွထဲကအသံ ကျောက်ရဲ့ အသံမှန်တာ ရာနှုန်းပြည့် သေချာလို့ သူကဆိုသည်။ ကျောက်မှာ အချိန်နှင့်အမ ျှ ထောက်လှမ်း စောင့်ကြည့်ခံနေရသော တရုတ်မြို့တော်တွင် နေထိုင်သည်။ ကျောက် မိသားစုမှ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ရန် ခွင့်တောင်းချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ။။။။။။
အဆိုပါ မှတ်တမ်းက တိန်ေရှာက်ပိန်သမိုင်းကိုလဲ ပုံေဖါ်မည်ဖြစ်သည်။ ကေျာက်ကျိယန်မှာ အများအမြင်တွင် ပါတီ၏ အမြင့်ဆုံးပုဂ်ဂိုလ်ဖြစ်ေသာ်လဲ တိန်မှာ မြင်ကွင်းေနာက်ကွယ်မှ အကြွင်းမဲ့အာဏာ ချုပ်ကိုင်ထားေသာ ပါတီလူကြီးပိုင်း ေခါင်းေဆာင်ဖြစ်သည်။ တေသွးတသံတမိန့် အာဏာရှင်စနစ် စိတ်အားသန်သူ ပါတီလူကြီးပိုင်းထဲတွင် တိန်ကို ေရှ့ဆုံးတွင် အမြတေစ ေတွ့ရသည်။ ၁၉၈၉ခုနှစ်တုံးက သေဘာထားတင်းမာသူများေကြာင့် တိန့်အမြင် ေပြာင်းလဲသွားခြင်းကို စာအုပ်တွင် ငြင်းချက်ထုတ်ထားသည်။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အခွံဗလာ ဟန်ပြစကားလုံးသက်သက်ထက် မပိုဟု တိန်ရှုမြင်သည်။ ထိုစာအုပ်ထဲတွင် တိန်အား လူအများ ချီးမွှမ်းသည့် စီးပွားေရး ပြုပြင်ေပြာင်းလဲမှုတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ခဲ့သည့် ေကျာက်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ေဖါ်ထုတ်ထားသည်။ ။။။။။။
မဟုတ်တရုတ် ဗကပကြေးမုံဂျီးအား အပြတ်တီးမည့် သာကီဝင် မြန်တြံ့ကြောင်ကြီး <3 <3 <3
Former reformist Communist Party general secretary Zhao Ziyang in 1994.
Thursday 14 May 2009 08.06 EDT
First published on Thursday 14 May 2009 08.06 EDT
The secretly recorded memoirs of the Chinese Communist party leader who was ousted for sympathising with the students during the 1989 pro-democracy demonstrations in Tiananmen Square have been released four years after his death.
In tapes secretly recorded during his 16 years under house arrest, Zhao Ziyang, the former head of the Communist party, denounced the killing of protesters asa“tragedy”, and challenged the party’s subsequent rejection of democratic reforms.
“On the night of June 3rd , while sitting in the courtyard with my family, I heard intense gunfire,” wrote Zhao, according to Reuters. “A tragedy to shock the world had not been averted.”
He added: “I had said at the time that most people were only asking us to correct our flaws, not attempting to overthrow our political system.”
“I told myself that no matter what, I refused to become the [Communist party] general secretary who mobilised the military to crack down on students,” he said in the memoirs.
He also looked to the future in his recordings, praising western parliamentary democracy, and warning: “If we don’t move toward this goal, it will be impossible to resolve the abnormal conditions in China’s market economy.”
He recorded about 30 hours, on Peking Opera [school] and children’s music tapes, in or around the year 2000. The 30 tapes were later smuggled out of China by three former high-ranking officials.
“People thought Zhao was probably broken and bitter and at the very least had so much surveillance there was no way he could have offered his final word on Tiananmen. But he had – and nobody knew,” Adi Ignatius, one of the editors of the English language edition, told the Guardian.
“It will remind people that Tiananmen did not have to end up as it did; it wasapower struggle at the top level – nothing to do with putting downaviolent rebellion.”
“There was real concern about security, because if Chinese officials had found out early they would have used whatever means they had to make sure this didn’t appear. It wasn’t just commercial reasons,” Ignatius added.
Bao Pu, the Hong Kong-based publisher of the book’s Chinese edition and son of Zhao’s former top aide, said: “There were no instructions [but] the fact he did this shows very clearly that he wanted his version of the story to survive.
“The material was very dense; he had actually prepared before he started recording and we think he hadadraft [text] from as early as 1993.”
He added: “I hope it will haveadirect impact on politics in China; politicians are going to be reading this and reflecting.”
Bao’s father, Bao Tong, the most senior official jailed over the 1989 protests, told Reuters: “I think it will cause party members to reflect deeply. I think it’s slightly more likely that senior leaders would read this book. It will give themalot to think about, and cause them to think about the party’s basic survival.”
He said he was “100% certain” the voice on an audio recording was Zhao’s. Reuters gave him earphones so he could listen to excerpts during an interview ataBeijing hotel restaurant, to which he was followed. He lives under round-the-clock surveillance in the Chinese capital. Zhao’s family declined requests for interviews.
“Deng had always stood out among the party elders as the one who emphasised the means of dictatorship. He often reminded people about its usefulness,” says Zhao, inarebuttal of the idea that Deng was swayed by hardliners in 1989.
Deng’s notions of democracy “were no more than empty words”, he suggested, according to Reuters.
Ignatius said the book also showed the depth of Zhao’s role in creating economic reforms for which Deng has received credit.